ပန်းခရေ: မွေးနေ့ပါတီ..နှင့် ကျေးဇူးတင်လွှာ
ဒီနေ့လေးက၂၄နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရဲ့ နောက်တစ်ရက် ၂၅ရဲ့ အစလေးပါ...မနေ့က မွေးနေ့ပွဲလေးမှာ... တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာနဲ့မှ ဧည့်မခံလိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး...။ အမှန်ဧကန်က ဒီနေ့မှ ပွဲလေးလုပ်ပြီး မွေးနေ့ချီင်္းမြှင့်သူများကို တစ်ခါတည်း ကျေးဇူးတင်ပွဲလေး ကျင်းပမယ်လို့ စဉ်းစားမိပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ကယ်လ်စီယမ် ကွေကာ သောက်လိုက်မိတာပါ...။ ခုတော့ အားလုံးကို အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပါပီ...။း)
အားနာနာနဲ့ပဲ ခုထပ်လုပ်တဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကို တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ရှင်...။မနေ့ ညနေက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကဲလိုက်တာ အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်..။ ဘလော့ကသူငယ်ချင်းတွေကို ဘာမှမကျွေးပဲထားသလို ဖြစ်သွားတာလည်း စိတ်မကောင်းလိုက်တား) ကဲသုံးဆောင်လိုက်ကြရအောင်လားရှင်...း)
ဒီကိတ်လေးနဲ့ ၀ိုင်လေးကိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ခုနှုန်းကျစီပါရှင်....(ကပ်စေးနှဲတယ်မထင်ပါနဲ့ရှင်..ဟိ)
ဒီကိတ်လေးကတော့ ကြိုက်တဲ့သူ ကြိုက်သလောက်စားနိုင်ပါတယ်ရှင်....
ဒီကပ်ပ်ချီနိုလေးကိုတော့ ကြိုက်သလောက် သုံးဆောင်ကြပါရှင်...
လုံးဝအားမနာနဲ့ အ၀သာစားနော်ဖြစ်သလိုလုပ်ရလို့ အားနာလိုက်တာရှင်...:P
ဘယ်ရမလဲ ဒါလေးက ကိုကြီးလင်းထက်ဆီက ပိုနေတာတွေ သွားမ လာတာ အားမနာနဲ့နော်..ဘီယာတိုက်ဝူးး ဗိုက်ပူမှာစိုးလို့ :P
ခုလို ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲလေးပြီးတော့... ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပါရစေ...
မွေးနေ့ကိတ်ကို sponsor ပေးတဲ့ မောင်လေး မျှော်လင့်ခြင်း ၊ မွေးနေ့ကျင်းပပေးပြီး မာစီးဒီးကားကြီး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကိုကြီးလင်းထက် ၊
မွေးနေ့နဲ့ကိတ်နဲ့အတူ အနော့်ပုံလေးကို ကြိုးစားပမ်းစား တစ်ညလုံး ထိုင်လုပ်ပေးတဲ့ သမီးနွေကဗျာ၊
Happy Birthday to Pan Hka Yay
As I promise here isabirthday present for you.
I come to know you aboutayear ago while
I started my Apprenticeship.
Back then, you were so sympathetic and encouraging.
I wanna say “Thank you” for that.
Let’s keep our friendship alive in the future too.
I just want you to know that you are precious and lovely.
You have the heart of honesty and love
So, I wanna bestow your birthday withaspecial prayer
May you haveajoyful life withahealthy mind and spirit.
May you haveapeaceful beautiful journey with your love one.
May you shine your mother’s glory with your outstanding life.
Above all, may your birthday prayers come true.
A gain HaveaHappppppy Birthday.. Pan Hka Yay.
With much love and earnest friendship:
>>> ဘ၀ဟာ ပွင့်လွှာတစ်လွှာဆိုရင် ဘ၀ပွင့်လွှာကို ရနံ့ကိုဖြာအောင်၊ ဘ၀ဟာ ပွင့်ချပ်တစ်ချပ်ဆိုရင် ဘ၀ပွင့်ချပ်ကို ရနံ့ ထွက်အောင်၊ ဘ၀ဟာ ၀တ်မှုန်တစ်မှုန်ဆိုရင် အဲဒီ ဘ၀၀တ်မှုန်ကို ရနံ့သင်းထုံအောင် လုပ်ဆောင်ကျင့်ကြံ နေထိုင်နိုင်ပါစေ ပန်းခရေ…။
မွေးနေ့ကဗျာလေးရေးပေးတဲ့ Apprenticeship နှင့် ဖိုးသား တို့အားလည်းကောင်း ၊
မွေးနေ့ဆုတောင်းများကို သူ့ထက်ငါ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ပထမဆုံးဖြစ်အောင် လာဆုတောင်းပဲ သူငယ်ချင်းမောင်မျိုး ၊သားလေး မင်းကျန်စစ် ၊ မအားကြတဲ့ကြားက လာရောက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ အစ်ကိုကြီးမိုး ၊ ဘလက် ၊ မမခင်ဦးမေ၊ မမမေမိုး ၊ ကောင်းကင်ပြာ ၊ မဖိတ်မိပေမယ့် အရောက်လာပေးတဲ့ အိမ် ၊ ကိုကြီးဖိုးဖောင် ၊ သယ်ရင်း လင်းဦး ၊ သယ်ရင်း အိမ်လေး ၊ ဖြိုးငယ်၊ မောင်လေး မျှော်လင့်ခြင်း ၊ ကိုတိုးလေး ၊ ဒေါင်းမင်း ၊ အရုပ်ကလေး ၊ မင်းအနော်ရထာ ၊ လွမ်းလုင် နှင့် အခြားဆုတောင်းပေးသော သူငယ်ချင်းများ အစ်ကိုအစ်မများ အားလုံးကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ ခုလို မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်...။ ဒီထဲမှာ မပါပေမယ့် အသီးသီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....။ အဝေးကနေ အရုပ်တွေပို့ပေးတဲ့ အစ်ကိုများနှင့်...ရှားရှားပါးပါး ဆင်ရုပ်လေး ရှာပေးတဲ့ ကျမ၏ သူ နှင့် မွေးနေ့လက်ဆောင်များပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...။
ဒီစိန်လက်စွပ်လေးကတော့ သူငယ်ချင်းလေး ကျော်သီဟဆီက လက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရထားတာပါပဲ...။ အနော့်သူငယ်ချင်းက အရမ်းကိုရက်ရောတာ ပေးထားတာ အများကြီး ပေးထားတာ...။ အနော်လည်း အများကြီးပိုနေတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်လေ...။ ဒီတော့ မွေးနေ့တက်ရောက်တဲ သူတွေအားလုံးကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးတာပါ... ဟိဟိ အနော်တော့ တော်တော်ကို ပိုက်ဆံကုန်သွားတာပဲ...။ ရသမျှပြန်ပေးတယ်လေ..။ ခုလို သူငယ်ချင်းတွေကို တစ်ရက်နောက်ကျပီးမှ ကျွေးရတာကို စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့နော်........။ အ၀စားသွားကြပါနော်... စပွန်ဆာတွေနဲ့ကြည့်ကျွေးတာဆိုတော့ အကုန်အကျသိပ်မများတော့ ဒီတစ်ခါမွေးနေ့တွက်ချေသိပ်ကိုက်ပါလားနော်...ဟိဟိ ..(နာတော့ အပျိုကြီးပေါက်စဖြစ်လာလို့လားမသိ ကပ်စေးနှဲတတ်လာပါလားနော် :P ) မွေးနေ့ပါတီလေးအတွက် ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်...။
ရင်ခုန်ဖွဲ့သီသူ ပန်းခရေ ရေးဖွဲ့ခဲ့ချိန် 9:25 AM
ဒါလေးက Birthday, မွေးနေ့
တူမလေးရေ... အဟဲ အခုမှ ကျွေးတာကိုး... အကုန်ဝါးမယ်..... :)
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အနာဂတ်တွေလဲ လှပပါစေလို့ ထပ်ဆုတောင်းသွားပါတယ် ပန်းခရေ...
အခုကျွေးတာလား မွေးနေ့လက်ဆောင်တော့ဘာမှာမပေးဘူးနော် ကျွေးတာတော့အကုန်စားသွားတယ်သိလားတီတီလေးရေ....... ပျော်ရွှင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်။
ညီမလေးပန်းခရေရဲ့ ၂၄နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နှစ်တစ်ရာတိုင်သည်ထိ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေပြီး လိုအင်ဆန္ဒများလည်း ပြည့်စုံပါစေ မုန့်လဲစားသွားတယ်နော် ဦးစိတ်ပုတ်ကြီးကအရင်လာစားသွားပါလား ဟွန်း သူကအရင်ဝါးသွားတာကိုး
ကျွေးသမျှ အကုန်နှိုက်စားသွားတယ်... ဟေး...ဟေး.... ဗိုက်ချောင်သွားရင် နောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမယ်ဟေ့...
မွေးနေ့ရှင်ညီမကြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကွယ်... :D
လှပတဲ့ အနာဂတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့
ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် .. ..
တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့
အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ...
ရှားရှားပါးပါး ဆင်ရုပ်လေးကို ပို့ပေးတာကွာ ..ဂုဏ်ယူတယ်ဟေ့ရောင်...
အမေကပ်စီး ကျမ၏သူ ဆိုတာ ဘူလဲ ကျော ကျော။
ဒီနေ့မှ ပြန်ကျွေးလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် မနေ့ဟာပဲ ပြန်သောက်ချင်တယ် ပြန်တိုက် ဒါပဲ :P
နောက်ကျလို့ ကုန်ပြီလား အမေရေ အခုစားတာတွေနဲ့ မဝရင် မနေ့က ကျွေးတာထပ်ကျွေးရမှာနော် ဟိဟိ... အသက်တစ်နှစ်ကြီးလည်း သမီးချစ်တဲ့ အမေက လှပနေဆဲပေါ့နော
သမီးကို များများကျွေးနော် ဟဲဟဲ :P:P:D
nout kya twar tal byar ,cake tg cone twar pi lar ma ti bu, pyaw shwin sa yar kg tat ba wa ta khu paing saing naing par say byar :D
ငါ့ လက်ဆောင်တွေနဲ့ အပြင်ထွက် ရင် သတိထား သူငယ်ချင်းရေ ... ပျော်ရွင်စွာနဲ့လိုရာပန်းတိုင်ကို အခက်အခဲမရှိ ဆက်လက် ချီတက်နိုင်ပါစေကွာ...
ညချိန်ခါ ကြင်စင်လင်းခနေသော လမင်းပမာ
ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့
link မပေးထားလို့ အေးအေးတိုက်ပါဆို တိုက်ဘူး ငိုလိုက်မှာ ဗြဲ....ဗြဲ...
၀ါးတီးဆိုရင်တော့ ဆွဲသည်ပဲ ၊ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ :)
ဘီယာ မရှိတော့လည်း ၀ိုင်တွေပဲ သောက်ရတာပေါ့လေ...
Happy Birthday & Many Happy Returns!!!!!!
အ၀တွယ်သွယားပြီဗျ.... ဘီယာက ဗိုက်ပူမှာစိုးလို့ဆိုတော့လည်း ၀ိုင်ပဲ သောက်ရတော့မှာပေါ့ဗျ...ဟာဟ..
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်တိုင်... တိုင်တိုင်...
တော်သေးတာပေါ့ .. အခုမှပဲ ၀ါးတီးမိတော့တယ် ...
အင်း ကားဖိုးကျေအောင် ကောင်မလေး ကိုပေးဖို့ လက်စွပ်တွေ ပြန်ယူသွားတယ် ဟဲ ဟဲ..။
ကျန်သေးလားဗျို့ .... မွေးနေ့ပွဲကိုနောက်ကျမှရောက်လာလို့ .. ဆုတောင်းပေးသွားတယ်နော် ... အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ရေးနိုင်ပါစေ....
ပါတီ လာတာနောက်ကျသွားတယ် ညီမလေးရေ
ဘယ်သူဘာပြောပြော တွေ့တာ အကုန်စားသွားတယ်ဗျာ ပိုးစိုးပက်စက်ကို စား
သွားတာ။ပါးဖြဲနားဖြဲကိုစားတာ။ လက်ဆောင်တော့ မပါဘူး အငှီးငှီး
Happy Valentines day,too.
အခုမှ သိတာ ပေခရမ်းရေ.. ဆောတီးနော် ဆောတီး ဆောတီး။
သယ်ရင်းကြီး... `ရောက်တဲ့အရပ်မှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေလို့ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ´။